कुन बार जन्मिएका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुस पुरा जानकारी – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कुन बार जन्मिएका मान्छेले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुस पुरा जानकारी
सोमबार, आषाढ ११ । २०७७ ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् ।
सीमामा रोकिएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल नभित्र्याइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ